राति निद्रा नलाग्ने समस्या छ ? यी उपाय गर्नुस् « Arthabazar.com
राति निद्रा नलाग्ने समस्या छ ? यी उपाय गर्नुस्
प्रकाशित मिति : २१ श्रावण २०७६, मंगलवार ११:४५
आजकल धेरै मानिस राति निद्रा नलाग्ने समस्याबाट ग्रसित हुन्छन् । जसले गर्दा दिनभर नै थकि, तनावयुक्त तथा अल्छी हुन्छन् । उमेर ढल्कँदै जाँदा, शारीरिक थकान वा मानसिक तनावले अझ बढी निद्रा लाग्दैन ।
यस्तो समस्याबाट मुक्ति पाउन शारीरिक कसरत तथा योग, प्राणायाम उपयुक्त विकल्प हो । जसले विनाऔषधिको प्रयोग, विनासाइडइफेक्ट जीवनशैलीलाई परिवर्तन गरिदिन्छ । विकसित यौगिक विधिको प्रयोग गरी यस समस्याबाट मुक्ति पनि पाउन सकिन्छ । १ दैनिक खाली खुट्टा हिँड्ने : आफ्नो अवस्था हेरेर दैनिक करिब १० देखि १५ मिनेट खाली खुट्टा दुबो या घाँसमा हिँडडुल गर्दा फाइदा हुन्छ ।
अत्यन्तै मोटोपन, घुँडा वा खुट्टासम्बन्धी कुनै रोगका कारण सहज हिँडडुल गर्न नसक्ने अवस्था भएमा भने लठ्ठी वा अन्य मानिसको सहयोग लिएर हिँड्नु फाइदाजनक हुन्छ । २ पानीमा खुट्टा डुबाउने ः मनतातो पानीलाई केही गहिरो भाँडामा राखी थोरै नुन राखेर घोल्ने । त्यसपछि सो नुनपानीमा खुट्टालाई गोलिगाँठोभन्दा केही माथिसम्म करिब १० देखि १५ मिनेटसम्म डुबाएर राख्ने । त्यसपछि पानीबाट निकालेर खुट्टालाई नरम कपडाले सुक्खा बनाएर पुछ्ने । ३ भ्रामरी ; यो एक प्राणायाम हो, जसले मस्तिष्कलाई कम्पन वा झन्झनाहट दिन्छ । यसरी शरीरलाई शिथिल बनाउँछ र आराम दिन्छ ।
मुखभित्र जिब्रोलाई माथिपट्टि दोबारी तालुमा टँसाउने । त्यसपछि मुख बन्द गरी नाकले भमरा वा मौरीको जस्तो आवज निकाल्दै श्वासलाई नाकबाट बाहिर निकाल्ने । यो प्रक्रिया करिब नौ पटक दोहोर्याउने । ४ पूर्ण आराम विधि: सर्वप्रथम शरीरका सम्पूर्ण अंगप्रत्यागंलाई स्वतन्त्र रुपमा खुला बनाउने । हातलाई शरीरभन्दा करिब १५ सेन्टिमिटरको दूरीमा राखी खुट्टालाई फट्याएर मृत शरीरको रुपमा ओछ्यानमा सुत्ने ।
सम्भव भएसम्म सिरानीको रुपमा अत्यन्तै पातलो नरम कपडालाई दोबारेर राख्ने । त्यसपछि आफ्नो शिरको पाउसम्मका सम्पूर्ण अंगलाई नछोडी सम्झिँदै जाने । सबै अंगमा आराम हुँदै गएको सूचना आफ्नो मस्तिष्कलाई दिँदै जाने । उक्त प्रक्रिया दोहोर्याउँदै जाने क्रममा हामी सहजै निदाउँछौँ ।